क्रिष्टियानो रोनाल्डो फुटबल युभेन्ट्स पर्दछन् । फुटबल » Mero Khel
१८,श्रावण,२०७८ ( Monday, August 2, 2021 ) 11: 24 am
MeroKhelPosted on १२,जेष्ठ,२०७८ May 26, 2021 २ महिना पहिले
क्रिष्टियानो रोनाल्डो विश्वको सर्वाेत्कृष्ट फुटबल खेलाडीहमध्येको सर्वाेत्तम खेलाडीको सूचीमा पर्दछन् । यो उनको फुटबल करियरको दौरान बनिरहेको उनको खेलको कौशलको तथ्यांकले आर्जेको सम्पतिको मुल्यांकनबाट बनेको हो । उनी हाल इटालिको सर्वाधिक सफल क्लब युभेन्ट्सबाट खेलिरहेका छन् ।
यद्यपी यस सिजन युभेन्ट्सले इटालियन सिरी ए उपाधि माथि लगातार बनाएको अधिपत्यमाथि विराम लागेको छ । क्लबको प्रदर्शन औसत रहेपनि रोनाल्डोको तिव्रता र तथ्यांकमा भने यस सिजन पनि खासै फरक परेन ।
उमेरको हिसाबले उकालो लाग्दै गरेपनि उनको फुटबल खेल प्रतिको लगावमा भने कुनै कमि आएको देखिदैन र त्यो उनको लगातारको प्रदर्शनले सिद्ध गरि नै रहेको छ । यस सिजन पाँच खेल बेन्चमा बिताउन उनी बाध्य भएपनि सिजनको अन्त्यमा रोनाल्डो सिरी ए मा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीको रुपमा गोल्डेन बुट हात पार्न सफल रहे ।
उनले यस सिजनमा २९ गोल गर्दै युरोपका तीन ठूला लिगहरुको एकै सिजनमा सर्वाधिक गोलकर्ता बन्ने पहिलो खेलाडीको किर्तिमान समेत आफ्नो नाममा लेखाए ।
म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्दा देखिको समयबाट आफूलाई प्रमाणित गरेका रोनाल्डो अहिले निर्विकल्प रुपमा संसारको सबैभन्दा महान खेलाडीको सूचीमध्येको एकमा आफूलाई उभ्याउन सफल छन् ।
उनको मैदानमा तिव्रता,अद्भूत सिजर किक र नौलो फुटवर्क रोनाल्डोको पहिचान हो भने यिनै कलाका कारण उनी अन्य कुनै पनि खेलाडीभन्दा फरक रहँदै आएका छन् ।
मैदानमा जति चतुर र चाखलाग्दो छन् रोनाल्डो उत्ति नै चाखलाग्दो छन् उनको मैदान बाहिरको जिवन । रोनाल्डोको बारेमा सायद तपाइलाई थाहा नभएको दश चाखलाग्दो विषयहरु समेट्ने प्रयास यस लेखमा समेट्ने प्रयास गरेका छौ ।
१०.बाल्यकालमा क्राइ बेबी (रुन्चे बच्चा) भनेर बोलाइन्थ्यो
अहिले जति सजग र धैर्यवान देखिन्छन् रोनाल्डो, उनी आफ्नो बाल्यकालमा त्यति धैर्यवान थिएनन् । उनले इच्छाएको सामाग्री नपाउँदा उनी भक्कानिर रुने गर्दथे । सोही कारण उनलाई उनको घरपरिवार र आफन्तले रुन्चे बच्चाको संज्ञा राखिदिएका थिए ।
यसबाहेक अर्काे नाम पनि थियो उनको जुन उनको साथीहरुले राखेका थिए । त्यो नाम हो ‘लिटल बि’ अर्थात सानो माहरी । फुटबल खेल्दा उनको अदुभत दौडने सक्ने क्षमताका कारण साथीहरुले उनलाई लिटल बि भनेर बोलाउने गर्दथे । उनको यही तिव्र गतिका कारण अहिले विपक्षी टिमहरु उनलाई पछ्याउन निक्कै सकस रहेको बेलासमयमा बक्तब्य समेत दिने गर्दछन् ।
०९.रोनाल्डो प्रतिबद्ध रक्तदाता हुन् र यो उनको शरिरमा अझै पनि कुनै ट्याटु नहु्नुले दर्शाउँछ
विश्व फु्टबलमा इङ्गल्याण्डका पूर्व कप्तान डेभिड बेक्ह्यामको ट्याटुको चर्चा शुरु भएयता सम्भवत प्राय सबै फुटबलरहरुले आफुनो शरिरलाई ट्याटुले भर्ने चलन शुरु भएको हो । तर रोनाल्डोले यो चलनलाई अपनाउन चाहेनन् र फलस्वरुप अझै पनि उनको शरिरमा कुनै ट्याट् छैन ।
सायद यो उनी प्रतिबद्ध रक्तदाता भएको कारण पनि हुन सक्छ । रेड क्रसले शरिरमा ट्याटु बनाएके चारमहिनासम्म रक्तान गर्न नमिल्ने नियम लगाएको छ । र नियमति रक्तदानमा लागेका रोनाल्डोले चार महिनासम्म रक्तदानबाट बञ्ति हुनुपर्ने कारणले पनि ट्याटु नखोपाएको हुन सक्छ ।
बोनस जानकारी : के तपाइलाइ थाहा छ, रोनाल्डोले आफ्नो सहकर्मी कार्लाेस मार्टिनका छोरालाई बचाउन आफ्नो बोन म्यारो दान गरेका थिए । मार्टिनका ३ वर्षे छोरा विरलै हुने रगतको रोगबाट ग्रसित थिए ।
०८.उनको नाम अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनबाट प्रभावित भएर राखियो
अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अहिले रोनाल्डोले लाउने जस्तै औठीं लाउँदैनन् होला तर रोनाल्ड रेगन सायद नभएका भए विश्व फुटबलका महान रोनाल्डोको नाम रोनाल्डो हुने थिएन । रोनाल्डोको नाम रोनाल्डोका पिता जोस डिनीु एभेइरोले राखिदिएका हुन् ।
रोनाल्डोको पिता जोसले अमेरिकी राष्ट्रपति रेनल्ड रोगनको सम्मानमा छोराको नाम रोनाल्डो राखेका थिए । रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति बन्नुअघि रोनाल्डोका पिता जोसको मनपर्ने हिरो थिए ।
रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति बन्नुअघि अमेरिकी चलचित्रमा हिरो भएर काम गर्दथे ।
०७.चिताभन्दा ५ गुणा बढी उफ्रन सक्ने क्षमता
सायद यो सुन्दा विश्वसयोग्य नहुन सक्छ तर वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुले समेत रोनाल्डोको यो अद्भुत क्षमतालाई प्रमाणित गरिसक्यो । उक्त अनुसन्धानले नै युभेन्ट्स स्टार रोनाल्डो चिताभन्दा ५ गुणा बढी उफ्रने सक्ने देखाएको छ ।
यसर्थमा उनी कुनै पनि एबिए बास्केटबल खेलाडीभन्दा बढी माथि उफ्रन सक्छन् र यसैको उदाहरण हो जुन तरिकाले उनले आफ्नो अनौठो खाल्को सिजर किकको प्रदर्शन गर्छन् ।
उनले आफुनो तिव्रता र उफ्रन सकने क्षमतालाई थप मजबुत बनाउन मैदानमा घण्टौ बिताउँछन् । उनी आफ्नो टिनएजको समयमा आफ्नो खुट्टामा भारी वजन राखेर दौडने अभ्यास गर्ने गर्दथे । उनी उक्त वजन निकालेर दौडदा अन्य ब्यक्तिहरुभन्दा आफू निकै गतिमा दौडन सकेको अनुभूति गर्थे ।
औसतमा कुनै फुटबलको सिजनमा रोनाल्डो कुनै पनि ओलम्पियन धावकले ट्रेनिङ्गमा दौडिएकोभन्दा ९०० गुणा बढी दौडने गर्दछन् ।
०६.रोनाल्डोका लागि उनका साथी अल्बर्ट फान्ट्राउले टिममा आफुनो स्थान त्यागेका थिए
सम्भवत यो संसारकै दुर्लभ साथीत्वको कथा हुन सक्छ । अल्बर्ट फान्ट्राउ,रोनाल्डोको शुरुवाती फुटबल खेल्ने दिनको सबैभन्दा मिल्ने साथी थिए । उनीहरुको प्रशिक्षकले खेलमा जसले सबैभन्दा बढी गोल गर्छ,उसले पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा रहेको फुटबल को सबैभन्दा राम्रो एकेडेमीमा छात्रवृति पाउने आश्वासन दिएका थिए ।
फान्ट्राउ र रोनाल्डो गोल संख्यामा बराबरी अवस्थामा थिए । फान्ट्राउलाइ गोल गर्ने अवसर मिल्दा उनले सो बल रोनाल्डोर्ला पास दिएका थिए । जसले गर्दा रोनाल्डोको जिवनले एक नयाँ अध्यायको शुरुवात पायो ।
रोनाल्डो आफूभन्दा राम्रो खेलाडी भएकै कारण आफूले रोनाल्डोलाई गोलको अवसर छोडेको फान्ट्राउले एक अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।
रोनाल्डोले फान्ट्राउले गरेको योगदान कहिल्यै बिर्सने छैनन् । रोनाल्डोले धन्यवाद स्वरुप उनका लागि घर,बैंकको कार्ड र केही मोटो रकम उपहार दिएका थिए ।
०५.म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्ने रोनाल्डो पहिलो पोर्चुगिज खेलाडी
सन् २००३ मा रोनाल्डोले इङ्गलिश क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडसाग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी सो समयमा टिनएजमा नै थिए तर म्यान युले उनलाई १२ मिलियन पाउण्डमा क्लबमा भित्र्याएको थियो । यससँगै रोनाल्डो म्यान यु प्रवेश गर्ने पहिलो पोर्चुगलका खेलाडी बने ।
उनलाई क्लबले जर्सि नम्बर ७ लगाउन दिएको थियो जसका कारण रोनाल्डोमाथि थप दबाब रहेको थियो । उक्त जर्सि त्यसअघि म्यान युका प्रभानवशाली खेलाडी डेभिड बेक्ह्याम,एरिक क्यान्टोना र जर्ज बेस्टले पहिरिने गर्दथे । यिनै तिन खेलाडीका कारण फुटबलमा जर्सि नम्बर ७ ले एक छुट्टै गरिमा स्थापित गरेको थियो ।
उक्त गरिमालाई रोनाल्डोले अहिले थप उचाइमा पुर्याइसकेका छन् ।
०४.बुबा मदिरामा लिप्त भएकै कारण रोनाल्डोले कहिल्यै मदिरापान गरेनन्
रोनाल्डो नाम राखिदिएका पिता जोस रक्सिको अत्यधिक सेवन गर्ने गर्दथे र यही खराब बानीका कारण रोनाल्डो २० वर्षको उमेर छदाँ पिता जोसले संसार त्याग्नु परेको थियो ।
पितालाई मदिाराको सेवनबाट अलग बनाउन रोनाल्डोले बारम्बार पिता जोसलाई सुधार केन्द«मा समेत राख्ने प्रयास गरेका थिए । तर अन्तत दुखद रुपमा रोनाल्डोले रक्सीकै कारण पितालई गुमाए । यो दुखद घटनापश्चात रोनाल्डोल आफ्नो जिवनकालमा कहिल्यै पनि मदिरा सेवन गरेनन् ।
०३. १५ वर्षको उमेरमा मुटुको शल्यक्रिया
असामान्य तिव्र मुटुको गतिका कारण रोनाल्डोको १५ वर्षको उमेरमा मुटुको शल्यक्रिया गर्नु परेको थियो । यदि सो समयमा उनको मुटुको शल्याक्रिया नभएको भए सम्भवत फुटबलको महानतम खेलाडीको रुपमा रोनाल्डो अघि आउने थिएनन् ।
उनी फुबटल खेल प्रति यति प्रतिबद्ध थिए की शल्यक्रिया समापन भएको केही दिनमै मैदामना अभ्यासका लागि ओर्लिएका थिए ।
०२.रोनाल्डोको सन्तानको बारेमा अझै पनि अन्यौलता
रोनाल्डोको पहिलो तीन सन्तनको विषयमा अझै पनि थुप्रै रहस्यहरु छन् । सन् २०१० मा रोनाल्डो क्रिष्टियानो जुनियरका पिता बने । जुनियरको जन्म अमेरिकामा भएको थियो । तर उनको आमा को हो भन्ने अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन ।
रोनाल्डोले क्रिष्टियानो जुनियरको हेरचाहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूले लिएका थिए । त्यसपछि क्रिष्टियानो जुनियरलाई रोनाल्डो र उनकी आमा डोलोरेसले हुर्काएका हुन् । जुनियरलाई जन्म दिने महिलाको नाम नखुलाउने सम्झौताका कारण रोनाल्डोको पहिलो सन्तानको आमाको हुन् भन्ने जिज्ञासा रहस्यकै गर्वमा रहेको छ ।
यसपछि सन् २०१५ मा रोनाल्डो जुम्ल्याहा सन्तानको पिता बने । यसपटक ती जुम्ल्याहा सन्तानलाई भने रोनाल्डोले अमेरिकामा सरोगेट आमाबाट जन्माएका थिए ।
त्यसपपछि २०१७ मा रोनाल्डोले आफ्नो गर्लफ्रेण्ड जोर्जिना रोड्रिगेजबाट एक छोरीलाई जन्म दिए ।
अहिले चारै जना सन्तानलाई रोनाल्डो र जोर्जिना मिलेर हुर्कारहेका छन् ।
०१. १४ वर्षको उमेरमा विद्यालयबाट निष्काशित
रोनाल्डोलाई उनको विद्यालयले १४ वर्षको उमेरमा निकालेको थियो । एकपटक उनी अध्ययनरत विद्यलायका शिक्षकले उनको बोलिमाथि ठ्टटा गर्दे जिस्काउँदा रोनाल्डोले रिस सहन नसकेर शिक्षकमाथि कुर्सी प्रहार गरेका थिए । सोही कारण विद्यालयले अनुशासनको कारवाही गर्दै रोनाल्डोलाई विद्यालयबाट निष्कासन गरेको थियो ।
उनलाई विद्यलायबाट निष्कासन गरेको प्रति आमा डोलोरेस दुखि भइनन् । आमा डोलोरेसले छोरा रोनाल्डोको भविष्य शिक्षा आर्जनबाट भन्दा पनि फुटबलबाट हुने ठम्याइसकेकी थिइन् । आमाले उक्त घटनापछि फुटबलमा केन्द्रित हुन सघाइन् । र फलस्वरुप रोनाल्डो अहिले विश्व फुटबलको एक उच्चतम स्थानमा आफूलाई आसिन गराइरहेका छन् ।
(यो सामाग्री विभिन्न इन्टरनेटमा पाइएको सन्दर्भ सामाग्रीहरुको असनुन्धानबाट साबर गरिएको हो ।_
तपाइलाई क्रिष्टियानो रोनाल्डोको बारेमा हामीले बनाएको तथ्यहरु कस्तो लाग्यो । कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।
Previous Postइङ्गल्याण्डका गोलकीपर निक पोपको घुँडाको शल्यक्रिया सम्पन्नPrevious Post
Next Postजोफ्रा आर्चर एक महिना मैदान बाहिरNext Post
Home>फिचर समाचार>रोनाल्डोले किन आफ्नो शिक्षकमाथि कुर्सि प्रहार गरे ? यो सँगै उनको बारेमा १० रोचक तथ्य